Esomeprazole (အီဆိုမီပရာဇော) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Esomeprazole (အီဆိုမီပရာဇော)
Esomeprazole (အီဆိုမီပရာဇော) ကဘာလဲ။
Generic Name: Esomeprazole (အီဆိုမီပရာဇော) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Esomeprazole (အီဆိုမီပရာဇော) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Esomeprazole ကိုအစာအိမ်နှင့် အစာပြွှန်ရောဂါများအတွက် အသုံးပြုပါသည်။ Proton Pump Inhibitors အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။
Esomeprazole သည် အစာအိမ်တွင်းရှိအက်ဆစ်ဓါတ်များလျှော့ချပေးသည်။ ရင်ပူခြင်း၊ အစာမြိုရခက်ခဲခြင်း၊ အဆက်မပြတ်ချောင်းဆိုးခြင်းများအတွက် အသုံးပြုပါသည်။
Esomeprazole သည် အက်ဆစ်ဓါတ်ကိုထိန်းညှိခြင်းအားဖြင့် အစာအိမ်နှင့် အစာအိမ်ပြွှန်အတွင်း အနာများမဖြစ်ပေးရန် ကင်ဆာများမဖြစ်ပွားရန် ကူညီပေးပါသည်။
Esomeprazole (အီဆိုမီပရာဇော) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့် အတိုင်းသောက်သုံးရပါမည်။ ထမင်းမစားမီ ၁ နာရီ တွင်သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။ မိမိရောဂါပေါ်မူတည်၍ ဆေးပမာဏနှင့် ကြာချိန်ကွာပါသည်။
ဆေးကိုဝါး၍မစားရပါ။ အတောင့်လိုက်မြိုချရပါမယ်။ ထိုသို့ မြိုချရန်အခက်အခဲရှိပါက ဆေးတောင့်ကိုဖွင့်၍ အမှုန့်ကို ဇွန်းထဲထည့်၍သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။ မသောက်သေးဘဲ နဲ့ ဆေးကို ကြိုမဖွင့်ထားပါနှင့် ဆေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။
လိုအပ်လျှင် အခြားသော အစာအိမ်ဆေးများနှင့် တွဲ၍ သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။ Sucralfate ဆေးသောက်သုံးနေလျှင် ထိုဆေးမသောက်မီ နာရီဝက်ခြားပြီးမှ Esomeprazole ကိုသောက်သုံးရပါမည်။
Esomeprazole (အီဆိုမီပရာဇော) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Esomeprazole ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လEsomeprazoleကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Esomeprazole ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။
Esomeprazole ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Esomeprazole (အီဆိုမီပရာဇော) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ယခုဆေးသို့မဟုတ်အခြားသောဆေးများ(dexlansoprazole (Dexilant), lansoprazole (Prevacid), omeprazole (Prilosec, Zegerid), pantoprazole (Protonix), rabeprazole (aciphex) နှင့် ဓါတ်မတည့်မှုများရှိလျှင် ဆရာဝန်ကိုကြိုတင်၍ ပြောရပါမည်။
သင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသော ဆေးများ၊ ဆေးဆိုင်က မိမိဖာသာ ဝယ်သောက်နေသောဆေးများ၊ ဗီတာမင်များ၊ အားဆေးများ၊တိုင်းရင်းဆေးများ သောက်သုံးနေလျှင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါ။ အောက်ပါဆေးများသောက်သုံးနေလျှင် သေချာပေါက်ပြောဖို့မမေ့ပါနဲ့။
cilostazol (Pletal)၊ clopidogrel (Plavix)၊ diazepam (Valium)၊ digoxin (Digitek, Lanoxicaps, Lanoxin)၊ ဆီးဆေး၊ သံဓါတ်အားဆေး၊ HIV ရောဂါဆေးအချို့ နဲ့ methotrexate (Rheumatrex, Trexall)
ဆရာဝန်က သင့် ဆေးဝါးများကို ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဆေးပမာဏ အတိုးအလျှော့ လုပ်ပေးခြင်းများကို ပြုလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေလျှင် နို့တိုက်မိခင်ဖြစ်လျှင် ဆရာဝန်ကိုကြိုတင်၍ ပြောရပါမည်။
အသက် ၅၀ကျော်သောသူများဖြစ်လျှင် ဆေးမသုံးမီ ဆရာဝန်နှငိတိုင်ပင်ပါ။ အသက်ကြီးသူများတွင် ဝမ်းပျက်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်တက်ပါသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့်ရောဂါပိုးမွှားများဝင်၍ အရိုးအလွယ်တကူကျိုးခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
အခြားသော အစာအိမ်ဆေးများနှင့် တွဲ၍သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Esomeprazole (အီဆိုမီပရာဇော) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Esomeprazole (အီဆိုမီပရာဇော) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Esomeprazole က ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်လဲ။
ဓါတ်မတည့်သောရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်သော အရေပြားအနီကွက်များဖြစ်ခြင်း အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း မျက်နှာ နှုတ်ခမ်းနှင့် လျှာတို့ရောင်ရမ်းလာလျှင် အရေးပေါ်ကုသမှုရယူပါ။
ဝမ်းသွားခြင်း (သွေး၊ အရည်ဝမ်း)
ကြွက်တက်ခြင်း၊ ကြွက်သားအားနည်းခြင်း၊ အားမပါသောခံစားမှုများ
တက်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပေါ်လာလျှင် အရေးပေါ်ကုသမှုရယူပါ။
မပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ ခေါင်းမူးခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ဝမ်းလျှောခြင်း ပျို့အန်ခြင်း၊ဗိုက်အောင့်ခြင်း ဝမ်းချုပ်ခြင်း နှင့် ပါးစပ်ခြောက်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည်လူတိုင်းတွင်မတွေ့ရ တတ်ပါ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလက္ခဏာများပေါ်ပေါက်ခဲ့လျှင် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Esomeprazole (အီဆိုမီပရာဇော) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Esomeprazole ဟာ သင်အခု လောလောဆယ် သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Esomeprazole ကို Rilpivirine နှင့် တွဲမသုံးရပါ။ မိမိဆရာဝန်သည် Esomeprazole ဆေးသုံးသင့် မသုံးသင့် ပြောင်းသင့် မပြောင်းသင့်ဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မည်။
အောက်ဖော်ပြပါဆေးများနှင့်လည်းတွဲသုံး၍မရပါ။ Atazanavir, Bosutinib, Citalopram, Clopidogrel, Dabrafenib, Dasatinib, Erlotinib, Eslicarbazepine Acetate, Ketoconazole, Ledipasvir, Methotrexate, Mycophenolate Mofetil, Nelfinavir, Nilotinib, Pazopanib, Posaconazole, Saquinavir, Tacrolimus, Thiopental, Vismodegib
Cranberry, Levothyroxine, Risedronate, Warfarin စသောဆေးများနှင့်တွဲသုံးပါက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပို၍ များပြားလာနိုင်ပါသည်။ ဆေးနှစ်မျိုးလုံးတွဲ၍သုံးလျှင် မိမိဆရာဝန်က ဆေးပြောင်းပေးပါလိမ့်မည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Esomeprazole (အီဆိုမီပရာဇော) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Esomeprazole က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Esomeprazole (အီဆိုမီပရာဇော) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Esomeprazole ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အသည်းရောဂါ (မစွန့်ထုတ်နိုင်သောကြောင့် Esomeprazole ၏ အာနိသင်များပြားလာကာ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။)
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Esomeprazole (အီဆိုမီပရာဇော) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Esomeprazole Magnesium 20 mg တစ်နေ့ တစ်ကြိမ်ကို ၄ပတ်သောက်သုံးရပါမည်။
Esomeprazole Strontium 24.65mg တစ်နေ့ တစ်ကြိမ်ကို ၄-၈ပတ်သောက်သုံးရပါမည်။
စားချဉ့်ပြန်သောရောဂါများနှင့် အစာအိမ်နာရောဂါများတွင် ထိုးဆေးကို 20-40mg ကို ၃မိနစ်ထက်မနည်း တစ်နေ့တစ်ကြမ် သုံးနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် မိနစ်၃၀ထက်မနည်း ထိုး၍သုံးနိုင်ပါသည်။
Esomeprazole Magnesium ကို 20-40mg တစ်နေ့တစ်ကြိမ် ၄-၈ပတ်သောက်သုံးရပါမည်။
Esomeprazole Strontium 24.65-49.3mg တစ်နေ့ တစ်ကြိမ်ကို ၄-၈ပတ်သောက်သုံးရပါမည်။
Helicobacter Pylori အစာအိမ်အနာဖြစ်စေသော ရောဂါများအတွက်
Esomeprazole Magnesium 40mg ကို တစ်နေ့တစ်ကြိမ် ၁၀ရက်သုံးနိုင်ပါသည်။ ထိုဆေးနှင့် တွဲ၍ ပိုးသတ်ဆေးများဖြစ်သော Amoxicillin 1000 mg၊ Clarithromycin 500mg တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်ကို ၁၀ရက်သုံးနိုင်ပါသည်။
Esomeprazole Strontium 49.3mg ကို တစ်နေ့တစ်ကြိမ် ၁၀ရက်သုံးနိုင်ပါသည်။ ထိုဆေးနှင့် တွဲ၍ ပိုးသတ်ဆေးများဖြစ်သော Amoxicillin 1000 mg Clarithromycin 500mg တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်ကို ၁၀ရက်သုံးနိုင်ပါသည်။
NSAID (စတီးရွိုက်မပါသော အရောင်ကျဆေး) ကြောင့်ဖြစ်သော အစာအိမ်အနာများအတွက်
Esomeprazole Magnesium 20-40mg တစ်နေ့တစ်ကြိမ်ကို ၆လအထိသုံးနိုင်ပါသည်။
Esomeprazole Strotium 24.65-49.3mg တစ်နေ့တစ်ကြိမ်ကို ၆လအထိသုံးနိုင်ပါသည်။
Zollinger-Ellison Syndrome: (အက်ဆစ်များခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော အစာအိမ်နာရောဂါ ) အတွက်
Esomeprazole Magnesium 40mg တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်
Esomeprazole Strontium 49.3mg တစ်နေ့နှစ်ကြိမသောက်သုံး နိုင်ပါသည်။
ပုံမမှန် အက်ဆစ် အများအပြားထွက်သောကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါများအတွက်
Esomeprazole Strontium 49.3mg တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်သောက်သုံး နိုင်ပါသည်။
ရှေးဦးစွာ အကြောဆေးကို 80mg မိနစ်၃၀ ကြာထိုးပေးရပါမည်။
ထို့နောက် ဆေးကို ၁နာရီ 80mg နှင့် 72နာရီကြာအောင် ဆက်သွင်းထားရပါသည်။(intravenous infusion)
ရှေးဦးစွာ Esomeprazole Sodiumကို အကြောဆေးကို 80mg မိနစ်၃၀ကြာအောင်သွင်းရပါမည်။
ထို့နောက် အကြောဆေးကို ၁နာရီ 80mg နှင့် 72နာရီကြာအောင် ဆက်သွင်းထားရပါသည်။
ကလေးတွေအတွက် Esomeprazole (အီဆိုမီပရာဇော) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
တစ်နှစ်အောက်ကလေးများအတွက် တိကျသောစမ်းသပ်မှုမျိုးမရှိပါ။ ဆေးအကြောင်းကို ကောင်းစွာသိနားလည်ရပါမည်။
တစ်နှစ် မှ ၁၁နှစ် ကလေးများအတွက် 10mg ကို တစ်နေ့တစ်ကြိမ် ၈ပတ်ထိသောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
၁၂ နှစ် မှ ၁၇ နှစ် အထိ 20mg ကို တစ်နေ့တစ်ကြိမ် ၄ပတ်ထိသောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
Esomeprazole Sodium – အစာမြိုပြွန်ရောင်ရမ်းနာအတွက်
၁လ မှ ၁နှစ် ကလေးများအတွက် ကိုယ်အလေးချိန်1kg လျှင် 0.5mg ထိုးဆေးကို ၁၀-၃၀မိနစ်ထိထိုးနိုင်ပါသည်။
၁နှစ် မှ ၁၇နှစ် အထိ 55kg အောက်ကလေးများအတွက်10mg ထိုးဆေးကို ၁၀-၃၀မိနစ်ထိထိုးနိုင်ပါသည်။
၁နှစ် မှ ၁၇နှစ် အထိ 55kg အထက်ကလေးများအတွက်20mg ထိုးဆေးကို ၁၀-၃၀မိနစ်ထိထိုးနိုင်ပါသည်။
ကလေးငယ်များတွင် Esomeprazole Strontium သုံးရန်မသင့်တော်ပါ။
Esomeprazole Magnesium – အနာကျက်ခြင်းအတွက်
တစ်နှစ် မှ ၁၁နှစ် ကလေးများ 20mg အောက်ကလေးများအတွက် 10mg ကို တစ်နေ့တစ်ကြိမ် ၈ပတ်ထိသောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
တစ်လအောက်ကလေးများအတွက် တိကျသောစမ်းသပ်မှုမျိုးမရှိပါ။ ဆေးအကြောင်းကို ကောင်းစွာသိနားလည်ရပါမည်။
တစ်လ မှ ၁နှစ် ကလေးများအတွက် 3-5kgး2.5mg 10mg ကို တစ်နေ့တစ်ကြိမ် သုံးနိုင်ပါသည်။
5-7.5kg ကလေးများအတွက် တစ်နေ့လျှင် 5mg သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။ 7.5-12kg ကလေးများအတွက် တစ်နေ့လျှင် 10mg သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။၆ပတ်သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
တစ်နှစ်အထက်ကလေးများအတွက် တိကျသောစမ်းသပ်မှုမျိုးမရှိပါ။ ဆေးအကြောင်းကို ကောင်းစွာသိနားလည်ရပါမည်။ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Esomeprazole (အီဆိုမီပရာဇော) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
ဆေးလုံး၊ အရည်၊ 10mg အထုပ်များ
အမှုန့် ၊ထိုးဆေး ၊အကြောဆေးများ အနေနှင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဆေးကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Esomeprazole. https://www.drugs.com/mtm/esomeprazole.html. 21/06/2016
Omudhome Ogbru, PharmD. Esomeprazole (Nexium, Nexium 24HR, Nexium IV).
Esomeprazole (Oral Route). http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/esomeprazole- oral-route/description/drg-20074322. 21/06/2016.Esomeprazole. https://www.drugs.com/mtm/esomeprazole.html. 21/06/2016
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း အက်စစ်ဓါတ်ကိုချေဖျက်ပေးတဲ့ဆေးတွေကို စိတ်ချလက်ချသုံးနိုင်လား